Farmaajo: Waa in Gaalkacyo ay noqotaa meesha ay ka bilaabato n... | Universal Somali TV
Farmaajo: Waa in Gaalkacyo ay noqotaa meesha ay ka bilaabato nabadeynta (Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira socdaalka nabadda ee uu ku marayo qeybo ka mid ah gobollada dalka ayaa gaaray magaalada Gaalkacayo ee xarunta Gobolka Mudug.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo waxaa salaan sharaf siiyey cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
“Waxaan dooneynaa in aan ka shaqeyno sidii magaaladan ay ku noqon lahayd meesha ay ka bilaabato nabadeynta iyo dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed, anaga oo meesha ka saareyna kala qeybsanaanta jirta.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Sidoo kale Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu ku suganyahay Gobolka Mudug waxa uu kulamo wadatashi ah la yeelan doonaa masuuliyiinta heer Gobol iyo heer Degmo, duubabka dhaqanka, ganacsatada, culumada, iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kan-xigaSaddex askari oo ku dhaawacantay qara...
Kan-horeBarasaabka deegaanka Garissa oo balan...
40,636,102 unique visits